सुमी दर्लामी, भाद्र २०७३। तिमीलाई पनि यसरी हाँस्न आउछ र ? अरे ! यार यो कस्तो प्रश्न हो ? मलाई चहि हाँस्नै नआउने हो र ? यदि त्यस्तो हो भने त म
देखाउने दाँत नहोस् छानबिन आयोग
रक्षाराम हरिजन – केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको आगमनले मधेसलाई हर्षित बनाएझैं देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले काग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गरेको छ । त्यसमध्ये
स्मरण : आँशुको उत्सव मनाउदै छु
सुमी दर्लामी, साउन २०७३ । मन्द मन्द चिसो बतासको साथमा हल्का सिमसिम पानी परिरहेको छ । म त्यहि बतास र पानी सँगै घरको छत्तमा बसेर यो बेस्त शहर नियालि रहेको छु ।
सोध्न नसकेको प्रश्न ?
सुमी दर्लामी, असार २०७३ । एउटा कुरा भन्छु है ? हुन्छ के कुरा भन्नुन । कसम कसैलाई भन्दैनौ ? भन्दीन । भगवान कसम भन्दीन भन… कसम भन्दीन के भाबी विश्वास लाग्दैन ? लाग्छ र त भन्न खोज्दै
मानविय सम्वन्धका यथार्थता
अनिश अतित, असार २०७३ । प्रियतम,यो मेरो सातौ लेख तिम्रो लागी आज । मेरो साथी, म तिमीलाई पहिले जस्तै अझै पनि पर्खि बसेको छु । मेरो भन्नुनै तिमी हौ सायद म
– राम बहादुर सुनार / देशलाई छुवाछुत मुक्तराष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक पूरा हुदैछ । २०६३ जेष्ठ २१ गते पूनर स्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषण गरेको थियो । यो घोषण पश्चात
ओली सरकारको कच्चा कुटनिति, प्रतिपक्ष क्रुद्ध
रघुनाथ बजगाँई, बैशाख २०७२ । एकीकृत माओवादीले नयाँ सरकार आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने भन्दै त्यसमा सहभागी हुन अन्य दलहरुलाई आह्वान गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरङ्गित भयो । ओली सरकार गयो भनेर बधाई र चिन्ता
बिशाल कार्की । गएको फागुन १५ गते स्वास्थ्य सेवा दिवसको दिनको कुरा हो । नेपाल एफ.एममा पत्रकारिता गर्दै गरेकोले अघिल्नो दिन नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रममा मलाई खटाइएयो । १ घण्टा लामो स्वास्थ्य
अपाङ्गता अधिकार र संवैधानिक व्यवस्था
रुद्र खड्का, बैशाख २०७२ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसङख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत (५ लाख १३ हजार) मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताबाट पीडित भएको पाइएको छ । प्राकृतिक रूपमा, दुर्घटना, प्रकोप,
अनिश अतित, चैत २०७२ । म नेपाली हुँ । मेरो देश नेपाल हो । मेरो परिचय मेरो देश हो । सानो छ मेरो देश तर यहाँ भित्र धेरै जातजाती, भाषा, धर्म,